अध्याय ४५ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
तैँले आफ्ना दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई सार्वजनिक रूपले यसरी न्याय गर्छस् मानौं यो केही पनि होइन। तैँले साँच्चिकै असल र खराब के हो भन्‍ने जान्दैनस्; तैँले लाज-शर्म भन्‍ने के हो जान्दैनस्! के यो व्यवहार डरलाग्दो गरी दुःसाहसी र स्वेच्छाचारी छैन र? तिमीहरूमध्ये हरेक अन्योल र धेरै उदास छौ; तैँले यति धेरै बोझ बोक्छस् कि तँभित्र मेरो लागि कुनै ठाउँ छैन। अन्धा मानिसहरू! तेरो निर्दयीपन त्यस्तो चरम हदसम्म पुगेको छ—यसको अन्त्य कहिले हुनेछ?
म तिमीहरूसँग बारम्बार मेरो हृदयदेखि बोल्छु अनि म तिमीहरूलाई मसँग भएको सबै कुरा दिन्छु, तर तिमीहरू यति कन्जुस छौ अनि तिमीहरूसित मानवताको थोरै अंश पनि छैन; यो बुझ्न साँच्‍चिकै गाह्रो छ। तँ किन आफ्नै धारणाहरूमै टाँसिरहन्छस्? तँ किन मलाई तँभित्र कुनै ठाउँ दिँदैनस्? म कसरी तिमीहरूलाई हानि पुर्याउन सक्थेँ र? तिमीहरूले यस प्रकारले व्यवहार गर्न जारी राख्नु हुँदैन—अब मेरो दिन वास्तवमै टाढा छैन। जथाभाबी बोल्ने, अन्धाधुन्ध व्यवहार गर्ने वा झगडा गर्ने र समस्या उत्पन्न गर्ने नगर; यसले तिमीहरूको जीवनमा के असल कुरा ल्याउन सक्छ र? म तिमीहरूलाई साँचो रूपमा बताइरहेको छु, मेरो दिन आउँदा यदि एउटै व्यक्तिले मुक्ति नपाए पनि, म अझै पनि मेरो योजनाअनुसार मामलाहरू सम्हाल्नेछु। म सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर हुँ भन्ने कुरा तिमीहरूले जान्नुपर्छ! कुनै वस्तु, कुनै व्यक्ति, कुनै विषयले मेरो अगाडिको कदमहरूमा बाधा दिने साहस गर्न सक्दैन। तिमीहरूविना मैले मेरो इच्छा पूरा गर्न सक्दिनँ भनेर तिमीहरूले सोच्नु हुँदैन। म तँलाई के भन्‍न सक्छु भने, यदि तैँले यस्तो नकारात्मक प्रकारले आफ्नो जीवनलाई लिइस् भने तैँले आफ्‍नो जीवन नष्ट मात्र गर्नेछस्; यो मेरो चासोको विषय हुनेछैन।
पवित्र आत्माको काम एउटा निश्चित चरणसम्‍म अगि बढेको छ अनि गवाही शिखरमा पुगेको छ। यो स्पष्ट सत्यता हो। छिटो गरेर, तिमीहरूका धमिला आँखाहरू खोल; तिमीहरूमा लगाइएका मेरा मेहनती प्रयासहरूलाई व्यर्थ हुन नदेऊ, अनि अब उपरान्त आफ्नै इच्छापूर्तिमा लीन नहोऊ। तिमीहरूले खुशीसाथ मेरो अगाडि राम्रा कामहरू गर्छौ, तर जब म उपस्थित हुँदिन, तब के तिमीहरूका कार्य तथा व्यवहारहरूलाई मैले देख्‍ने गरी मेरो सामु राख्‍न सकिन्छ? तिमीहरूलाई दुष्टबाट असल कुरालाई छुट्याउन आउँदैन! तिमीहरू मेरो कुरा सुन्दैनौ, तिमीहरू मेरो अगाडि एउटा कुरा गर्छौ अनि मेरो पछाडि अर्को कुरा गर्छौ। तिमीहरूले अझै पनि म मानिसको हृदयको गहिराइलाई हेर्न सक्‍ने परमेश्‍वर हुँ भन्‍ने तिमीहरूले महसुस गरेका छैनौ। तिमीहरू चरम रूपमा अज्ञानी छौ!
पछि, अगाडिको बाटोमा, तैँले युक्ति रच्नु हुँदैन वा छल र कुटिलतामा लाग्नु हुँदैन, नत्र भने परिणामहरू अकल्पनीय हुनेछन्! तिमीहरूले अझै पनि छल र कुटिलता के हुन् भन्ने कुरा जान्दैनौ। तिमीहरूले मलाई हेर्न नदिने, तिमीहरूले खुलासा गर्न नसक्‍ने कुनै पनि कार्य र व्यवहारहरू छल र कुटिलता हुन्। अब, तिमीहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ! यदि भविष्यमा तिमीहरू छल र कुटिलतामा लाग्यौ भने, नबुझेको जस्तो बहाना नगर—यदि तिमीहरूले यस्तो कार्य गर्‍यौ, तिमीहरूले जानी-जानी गलत काम गरिरहेका हुन्छौ, अनि तिमीहरू दोबर दोषी हुन्छौ। यसले तिमीहरूलाई आगोद्वारा जलाइने अवस्थातिर मात्रै डोर्याउनेछ वा त्योभन्दा पनि खराब, यसले तिमीहरूलाई बरबाद गरिरहेको हुनेछ! तिमीहरूले यो कुरा बुझ्‍नैपर्छ! तिमीहरूले आज सामना गरिरहेको कुरा भनेको प्रेमको ताडना हो; यो पक्कै पनि निर्दयी न्याय होइन। यदि तिमीहरूले यो कुरालाई देख्न सक्दैनौ भने, तिमीहरू अत्यन्तै दयनीय छौ, अनि तिमीहरू आशारहित छौ। यदि तिमीहरू प्रेमको ताडना स्वीकार गर्न इच्छुक छैनौ भने, तिमीहरूमाथि आइपर्ने भनेको निर्दयी न्याय हुनेछ। जब त्यसो हुन्छ, तब मैले तिमीहरूलाई भनिनँ भनेर गुनासो नगर। म आफ्नो जिम्मेवारीहरूदेखि पन्सिएको हो भन्‍ने होइन, तर तिमीहरूले मेरा वचनहरू सुनेका छैनौ र मेरा वचनहरूलाई पूरा गरेका छैनौ। म अहिले तिमीहरूलाई यो भन्दैछु, नत्र भने मानिसहरूले मलाई पछि दोष लगाउनेछन्।
अघिल्लो: अध्याय ४४
अर्को: अध्याय ४६